Sidee Hackers Hack - Concert Concert Concerns
Qodob kasta oo online ah oo ku lug leh server, waxaa jira halis ah in la jabsado. TheInternetka waxaa ka mid ah u dirista iyo u helitaanka macluumaadka ee server. Natiijo ahaan, kobcinta webka intiisa badani waxay diiradda saaraysaa isticmaalaha iyoma aha xasilloonida nidaamka - istruzioni valvole termostatiche danfoss. Sababtan awgeed, dadku waxay abuuraan shabakadda e-commerce oo kaliya oo u fulin karta hawlahaas si habsami leh,iska indha-tiray xaqiiqda ah in dadka qaba cudurrada xanuunsan ay sidoo kale isticmaali karaan fursadan. Sidaa darteed, nabadgelyada boggaaga internetka iyo sidoo kale kuwamacaamiishaadu waxay kuxirantahay sida ay wax ku oolka ah ee aad uga hortagi karto isku daygeeda hack
Waxaa jira siyaabo fara badan oo ay dadku u fuliyaan jajabkooda. Ujeedada Hackers waa inay tahayhelitaanka internetka aan loo fasaxin gelitaanka iyo helitaanka macluumaadka kale ee ku jira xogta macluumaadka serverka. Xaaladaha qaarkood, waxay isku dayi karaansoo qaado websaydka adoo isticmaalaya botnets ama macnaheedu yahay xaasidnimo xun. Dad badan oo sameeya bogag internet ah sida blogs ama goobaha e-commerce yaab lehsida shabakadaha casriga ah ay u sameeyaan khiyaanadooda. Wixii mid ka mid ah si loo sameeyo hababka iyo hababka ka hortagga hackers, waxaa loo baahan yahay in la fahmo sida hackersshabakadaha internetka.
Jack Miller, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,waxay qeexaysaa hababka qaarkood, oo khadka loo adeegsado, sida hoose:
Iskudhegidda Xerooyinka Site (XSS)
Kuwani waa calaamado dhexdhexaad ah oo dhexdhexaadin ah oo ku shaqeyn kara server-yada una weeraraan kuwa nugulkombuyuutar..Khariidaduhu waxay ku bilaabmaa iyadoo la isticmaalayo isticmaalaha adoo gujinaya isku xirka halista ah. Xidhiidhkani wuxuu ku shaqeeyaa qoraalka shabakada, halkaas oo ahKacaanku wuxuu raadiyaa wadiiqooyinka isticmaalka kale. Tusaale ahaan, hackerku wuxuu qaadi karaa dhammaan xogta browser sida password iyo cache. Kacaankasidoo kale wuxuu isticmaali karaa sifooyinka browserka sida mikrofoon iyo sidoo kale webcam fog iyada oo aan ogolaansho dhibanaha.
Isticmaalidani waxay isticmaashaa nuglaanta luuqadaha barnaamijyada qaarkood. TaniIsticmaalka badanaa wuxuu ka shaqeeyaa bogagga internetka kuwaas oo leh qaab dhismeedka nidaamka liita. Tusaale ahaan, aaladda PHP waxay ku dhici kartaa weerarka duritaanka ee SQL.Kacaanku wuxuu isku dayaa inuu galo xogta website-ka iyo inuu helo dhammaan xogta. Macluumaadka sida macluumaadka shirkadda, xisaabaadka user, iyo creditMacluumaadka kaararka ayaa noqda mid nugul habkan. Waxaa intaa dheer, weeraryahanku sidoo kale wuu soo dejin karaa, la soo dejin karaa ama wuu ka beddeli karaa beeraha safafka iyo safafkamacluumaadka aad isticmaalayso. Xaaladaha kale, hackers ayaa laga yaabaa in ay isticmaalaan Editet-ka, halkaas oo ay xadayaan xogta maaddaama ay u dhex marayso server-kaiyo isticmaalaha.
Markaan samayno shabakadaha, waxaan ku guul darreyneynaa in aan aqoonsano khatarta feylasha khasaaraha ahku rid ganacsiyada e-commerce. Natiijo ahaan, websiyo badan ayaa loo dhisay si ay ugu adeegaan macaamilka iyada oo aan maskaxda lagu hayn. Hackers-ku waxay qaban karaannidaamyo badan oo website-ka ah, kuwaas oo intooda badan laga yaabo inay xadidaan, khayaano ama khalkhal galinta macluumaadka gaarka ah. Marka la soo koobo, ammaankaagagoobta, iyo sidoo kale kuwa macaamiishaada, waxay kuxirantahay adiga, milkiilaha iyo maamulka. Inta badan raadinta Mashiinka Raadinta (SEO) ayaa lagu beegsanayaa sii kordhayaansaxnimada website-ka iyo sidoo kale muuqaalka SERP. Khasaaradu waxay keeni karaan goob ku saabsan arrintan. Aqoonta ku saabsan hababka hackingwaxay badbaadin kartaa shirkad weyn oo khasaare ah iyo sidoo kale kordhinta maamulka domain ee makiinadaha raadinta sababo ammaan dartood.